Goobaha lagu sheekeeyo ee Gaalkacyo oo looga guurayo gawarida goobaha lagu badanyahay lagu weeraro. | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Saturday, May 25th, 2013	Home
Goobaha lagu sheekeeyo ee Gaalkacyo oo looga guurayo gawarida goobaha lagu badanyahay lagu weeraro.
Number of View :1109Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa qadyaan looga taaganyahay dad hubesan oo wata gawaari nuuca raaxada ah oo rasaas kufura goobaha dadku ku qaxweeyaan, arintaas oo sababtay in dadku ay ku dhiiran waayaan tegitaanka goobaha lagu sheekeyo.
Mid kamid ah dad sida aadka ah u jeclaa goobaha lagu fiidsado ama lagu casiryeeyo oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa waxa uu sheegay in uusan waayahaan tegin meel fagaara ah oo dad badan isugu yimaadaan kadib markii ay bar tilmaameed goobahaasi u noqdeen werarro kedis ah oo gawaari nuuca raaxada ah lagu fuliyo.
Waxa uu sheegay ninkaasi in dad badan oo asaxaabstiisa ahna uu kawaaniyay goobahaasi maadaama qatarteedu badatay, asyanna ogeyn cidda beegsaneysa.
Gaalcayo oo koofur iyo waqooyi ay kala maamulaan Galmudug iyo Puntilalnd ayaa waxa ay caan ku tahay in goobaha Bulshadu ku badantahay lala eegto weerarro ay fulinayaan rag hubeysan oo gawaari ku ordaya iyada oo bisha dhamaatay gudaheeda lasoo wariyay laba dhacdo oo nuucaas ah oo kakala dhacay labada gedi ee magaalada.
Arintasi dadka qaar waxa ay ku macneeyeen falal aar goosi ah oo ay fulinayaan dad aanooyin isu haya oo ku kala, nool labada jaanib ee magaaladu ay u kala jabantahay inkasta oo arintaasi si sax ah cid u sheegi karta aysan jirin.
Arimaha bulshada/Galmada	Dhagayso Maamulka gobolka Bakool oo ka Warbixiyay Howlgalo ay deeganadaasi ka wadeen